Zon'olombelona · Jona, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Jona, 2018
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Jona, 2018
Manatona ny fifidianana, miatrika fanafihana na fakana an-keriny ny Pakistaney mpanao gazety na mpikatroka
Azia Atsimo 30 Jona 2018
Ity fifidianana ity no hanamarika ny fotoana faharoa isian'ny tetezamita (famindram-pahefana) demaokratika eo amin'ny tantaran'ny firenena.
Kioba: Tsingerintaona Faha-55 Taonan'ny 26 Jolay 1953
Amerika Latina 29 Jona 2018
Tao Kiobà tamin'ny taona 1953, teo amperin'ady hanohitra ny jadona nataon'i Fulgencio Batista izay nahazo tohana tamin'ny fiarovan'ireo Amerikana, nitarika vondrona iray nisy an'ireo tanora revolisionera i Fidel Castro nandritra ny fanafihana ny Toby Moncada tao Santiago. Ankehitriny io hetsika io dia fantatra amin'ny maha-fiandohan'ny Revolisiona Kiobàna azy. Tamin'ny faran'ny herinandro, ny 26 jolay 2008, nankalaza ny tsingerintaona faha-55-an'io fanafihana io i Kiobà, fety notarihan'i Raul, rahalahy sady mpandimby an'i Fidel, amin'ny maha-filoha Kiobàna azy.
La Barbade : Inona No Nanjo an'i Akobi Tacuma Maloney?
Karaiba 28 Jona 2018
Vokatry ny fahafatesana nampiahiahy nanjo ny Rastafariana iray mahira-tsaina , nanokatra blaogy AfriKa CRY BLOOD ny Conseil lchirouganaim ho an'ny Fandrosoan'ny Rastafari (ICAR) mba "hampahafantarana, hiarovana ny fahatsiarovna ary hiarovana ny Ras Tacuma.
Voampanga noho ny fanohintohinana ny fiarovam-pirenena tamin'ny fisoloantena ny hetsi-panoherana manohitra ny hijab i Nasrin Sotoudeh, mpisolovava Iraniana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Jona 2018
"Raha manontany ahy ianareo hoe inona no tena eritreritr'ireo manampahefana dia hamaly aho hoe tian'izy ireo hijanona ao an-tranony fotsiny i Nasrin ary ... ary mitsahatra tsy hiaro intsony ireo mpikatroka sivily sy politika..."
Ela niandrasana, nahazo fankatoavana ho ara-dalàna ny fikambanana LGBT tokana ao Angola
Afrika Mainty 28 Jona 2018
"Ara-dalàna isika ankehitriny ary afa-miresaka amin'ny tompon-trano tsy misy tahotra, afa-manao sy manohy ny asantsika ara-dalàna isika, satria handoa ny anjaran'ny fanjakana isika."
Sodana: Mitantara ny fomba mampahonena nisamborana azy ilay mpikatroka an-tserasera
Afrika Mainty 27 Jona 2018
Nosamborina nandritra ny bemidina tao an-tranony ny alin'ny 5 Martsa 2009 ary navotsotra ny 11 martsa ilay mpikatroka amin'ny aterineto Sodaney sady mpisolovava Abdel Hakim Abdel Rahman Nasr. Voasambotra izy ora vitsy monja taorian'ny nanehoany ny fanohanany ny didy fampisamboran'ny Fitsarana Heloka Bevava Iraisam-pirenena ny filohan'i Sodana Omar al-Bashir.
Kintan'ny football iray vao misandratra anisan'ny Uyghurs iray tapitrisa mahery alefa any amin'ny toby fanarenan-tsaina shinoa
Azia Atsinanana 26 Jona 2018
Tombanana ho mihoatra ny iray tapitrisa ny Uyghurs any Xinjiang nalefa tany amin'ny toby fanarenan-tsaina mba ho esorina izay nianarany ary hanitsiana ny fijeriny ara-pivavahana sy ara-politika.
Nepal: Resaka Hafa Indray
Azia Atsimo 26 Jona 2018
Miketrika fifanarahana fandriampahalemana vavao indray ny fiarahan'ireo antoko fito sy ry zareo Maoista. Niharan'ny tifitra avy amin'ny ankolafy maro isankarazany ilay fifanarahana farany nisy teboka valo vitan-dry zareo.
Arabisc: Fifidianana Any Bahrain, Fahafatesan'Ankizy, Fahalalahana Manjavozavo !
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Jona 2018
Nifidy fanindroany ny ho solombavambahoaka teo amin'ny tantara vaovaony i Bahrain . Manodidina ny 300.000 ireo mpifidy nandeha nandatsa-bato. Isan'izany ilay mpitoraka bilaogy Haythoo, izay nanantena ....... ny 'antokony'. Fa ankoatra izany ireo tranga hafa miseho eo amin'ny firenena, samy tantarain'ny mpitoraka bilaogy avokoa ireny.
Ejypta: Mitaky Eid lavitry ny fanorisorenana ara-nofo ny bilaogera
Satria efa akaiky ny Eid Al Fitr (ny fiafaran'ny Ramadan), miomana indray amin'ny fanorisorenana ara-nofo bebe kokoa noho izay efa nanjary fenitra manelingelina ny ny vehivavy ao Ejipta.